13 ứng dụng xem tivi, truyền hình online phổ biến trên Android tivi | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: 13 ứng dụng xem tivi, truyền hình online phổ biến trên Android tivi | Muasalebang in Muasalebang
1 Ingabe ufuna ukubuka i-TV ku-Android TV kodwa awazi ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza ongalukhetha? Bheka iziphakamiso ezilandelayo zezinhlelo zokusebenza eziyi-13 ezidumile zokubuka i-TV ne-TV ku-Android TV ukuze ujabulele izinhlelo eziningi ze-TV ezihlukene nezikhangayo zasekhaya nezangaphandle, ezikusiza ukuthi uphumule ngokunethezeka!
1.1 kuqalaI-FPT Dlala
1.2 2Iziqeshana ze-TV
1.3 3I-VTVCab ivuliwe
1.8 8I-TV360 SmartTV
1.9 9I-STV Play
1.10 eziyishumiI-SCTV Online
1.11 11I-VTV Hamba
1.12 kweshumi nambiliI-VTV Entertainment
Ingabe ufuna ukubuka i-TV ku-Android TV kodwa awazi ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza ongalukhetha? Bheka iziphakamiso ezilandelayo zezinhlelo zokusebenza eziyi-13 ezidumile zokubuka i-TV ne-TV ku-Android TV ukuze ujabulele izinhlelo eziningi ze-TV ezihlukene nezikhangayo zasekhaya nezangaphandle, ezikusiza ukuthi uphumule ngokunethezeka!
Uma i-TV yakho kuyi-TV evamile noma i-smart TV, kodwa i-Android TV Box ixhunywe ngempumelelo kumamukeli futhi nomamukeli enendawo yenkumbulo eyanele, usengakwazi ukulanda lezi zinhlelo zokusebenza futhi uzisebenzise ngokuvamile.
Ukulanda uhlelo lokusebenza, ufinyelela isitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Google Play ku-TV yakho noma ibhokisi le-Android TV ukuze uthole igama lohlelo bese ulilanda.
Jabulela isitolo se-movie yokuzijabulisa nge iziteshi ezingaba ngu-200 iziteshi zikamabonakude ezikhethekile zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezifana ne-VTV, HTV, VTC, CNN, Cartoon, FOX Life,… kusukela kuhlelo lokusebenza ku-TV.
Buka bukhoma imiqhudelwano yezemidlalo ephezulu emhlabeni efana ne-English Premier League, Serie A, AFF, C1 Cup,…
Buka ividiyo yekhwalithi ephezulu, izithombe ezibukhali ezifika ku-4K, umsindo ogqamile.
Hlala ubuyekeza amamuvi e-blockbuster, amamuvi ase-Korea, amamuvi e-Chinese, njll ngendlela eshesha kakhulu.
Amaqembu amavidiyo nezinhlelo ze-TV aklanywe ngamaqembu anezinhlobo ezihlukahlukene ukusiza ukuthuthukisa umuzwa wokubuka.
Isici ongasigcina ezitobhini futhi ulondoloze izintandokazi.
Ungaphrojusa amamuvi owabukayo ngocingo noma kuthebulethi yakho uwafake ku-TV.
Ama-akhawunti omndeni avamile avunyelwe kuphela ukungena ngemvume kumadivayisi angu-5, ngakho kungase kube nezimo lapho i-akhawunti eku-TV ikhishiwe khona futhi kufanele iphinde ingene ngemvume.
Nakuba isekela isici sokudlala kabusha kwamameshi ebhola egejiwe, i-FPT Play izokhawulela ikuvumela ukuthi ubuyekeze eminye imidlalo yakamuva.
Ngemva kwesibuyekezo ngasinye, kungase kube nephutha lokulahlekelwa iziteshi, ukulahlekelwa amamuvi,… noma ukungakwazi ukungena ngemvume.
Kungase kube nephutha eliba yiqhwa, liphume ngokuzenzakalelayo namanye amadivaysi, ikakhulukazi ama-TV Boxes.
I-Clip TV iyisevisi ekhangayo yokubuka imuvi inqolobane yokuqukethwe ecebile nehlukahlukene: amamuvi, ezemidlalo, amahlaya, izinhlelo ze-TV,… I-copyright engu-100%..
Gcina isiteshi nge Iziteshi ze-TV ezingaphezu kuka-140 ngaphakathi nangaphandle.
Kunezinhlelo ezinjengalezi: ukufunda isiNgisi, ukufunda ukudweba, ukuhlola, … ezezingane kuphela, ukuzisiza ukuba zicabange nokufunda kangcono.
Amahora angaphezu kuka-3,000 wamamuvi ahehayo futhi anothile we-blockbuster nochungechunge anezinhlobonhlobo zezinhlobo.
Ikhwalithi yesithombe enokulungiswa kwe-4K ibukhali, ibushelelezi, ukubuka akukhiqizi.
Okuqukethwe okukhethekile okutshalwe kwaphinde kwakhiqizwa yi-Clip TV: I-Audio Movie, Irediyo Yezindaba, Izindaba Zomsindo zikusiza ukuthi ujabulele incwadi yakho oyithandayo, noma imuvi enamazwi akhangayo nakhangayo kakhulu.
Xem Thêm Top 5 Smart tivi rẻ dưới 5 triệu đáng mua tại Điện máy XANH | Muasalebang
Buka izinhlelo ze-TV ezinomkhawulo wezinsuku ezingu-7.
Ngokuvamile kubonisa amaphutha, amaphutha okungena.
Amanye amavidiyo anokulungiswa okuphansi namashaneli akufiphele futhi kunzima ukuwabuka.
I-switchboard yokusekelwa kwesevisi ivulwa kuphela ngo-24/7 kwababhalisile be-MobiFone, abanye ababhalisile bazokhawulelwa esimisweni sesikhathi kusukela ngo-8 ekuseni kuya ku-10 ebusuku.
Bangaphezu kuka-10,000 abawinile Okuqukethwe kwe-VOD (Ividiyo edingeka kakhulu – ividiyo idingeka kakhulu) inothile futhi ihlukene ngezinhlobo ezinjengamamuvi ama-blockbuster, amamuvi wetiyetha, amadrama aseShayina nawe-Korean, imidlalo yamahlaya-yokuzijabulisa, njll.
Cishe iziteshi ezingama-200 ithelevishini yasekhaya neyamazwe ngamazwe (VTV, SCTV, HTV, VTC, …) enamakhulu ezinhlelo ezikhethekile nsuku zonke zayo yonke imindeni, yonke iminyaka.
Ukusakazwa bukhoma kwemiqhudelwano yezemidlalo yasekhaya neyamazwe ngamazwe ekhanga kakhulu, izinhlelo zezingane ezifundisa kakhulu neziphephile zezingane. Ikakhulukazi, uchungechunge lwama-hit okukhethekile, amamuvi e-blockbuster, amamuvi akhethekile ase-Asia avela eziteshini zamamuvi adumile i-FOX Movies, BOX Movie,…
Khulula cishe iziteshi ze-TV ezikhangayo ezingaba ngu-60.
Isignali ye-TV ebukhoma ye-ON izoshesha ukusuka 15 – 35 imizuzwana uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza ze-TV.
Dlala kabusha isici ukuze ungaphuthelwa izinhlelo ezisakazwayo.
Konke okuqukethwe kuvikelwe ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuvikela i-copyright.
Izwa umsindo ogqamile, izithombe ezibukhali,… ezinhlelweni ze-TV namamuvi e-4K atholakala kuphela ku-VTVcab’s ON.
Ikhono lokusesha okuqukethwe, shintsha iziteshi ngezwi.
Isivinini sokulayisha isiteshi sihamba kancane.
Kungase kube khona ukunethezeka ngezikhathi ezithile.
Kwesinye isikhathi kuzoba nomlayezo wephutha ongakwazi ukubukwa.
[info] Buka Okuningi: Isikhungo Senkonzo Yamakhasimende VTVcab KU-Vietnam Cable TV isekela 24/7/info]
Iphethe iziteshi ezingu-169 zekhwalithi ye-HD futhi ithuthukela ku-4K.
Uma ukhokha imali, ungayibuka ngaphezulu kwama-200 Iziteshi ze-TV ezahlukahlukene ezinekhwalithi ephezulu.
Umtapo wezincwadi omkhulu wama-movie wezinhlobo eziningi: Isenzo, amahlaya, i-socio-psychology kusukela kwakudala ukuya kwesimanje, ekhiqizwe amazwe ahlukene.
Kukhona okuqukethwe kwezinhlobo zomculo, ezemidlalo, izeluleko zezempilo,…
Ncoma okuqukethwe komuntu siqu..
1 I-akhawunti ye-MyTV ingangena kumadivayisi angu-5 futhi ibukele kumadivayisi angu-2 ngesikhathi esisodwa.
Okuqukethwe kwamahhala kuncane kakhulu futhi akunasimilo.
I-3G/4G Viettel yamahhala enedatha engu-100% yesivinini esiphezulu, ithrafikhi engenamkhawulo uma uyibuka.
Buka iziteshi ze-TV eziku-inthanethi eziyi-147 ezifana nalezi: VTV, VTC, HTV, THVL, VTVcab kanye namashaneli asendaweni angama-63.
Imiqhudelwano yebhola ebukhoma: English Premier League (Premier League), Champions League, Europa League, Wolrd Cup qualifiers, V-League,…
Isitolo samamuvi e-HD Online sihlukile ngezinhlobo futhi sicebile ngokuqukethwe.
Buyekeza ngokushesha izinhlelo ze-TV, iziqeshana zamavidiyo ezemidlalo, izindaba, njll.
Isicelo sokusekela samahhala kuphela uma usebenzisa 3G noma 4G kwe I-Viettel.
Kufanele ungene ngemvume ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza.
Uma ubuka i-TV, kuhlala kunezikhangiso.
Iqoqo lefilimu lincane futhi lindala.
Kwesinye isikhathi kuba khona into ethi “umsindo uhamba ngaphambi kokuthi isithombe sihambe”.
Okuqukethwe kokuzijabulisa okuhlukahlukene kanye nekhwalithi kubuyekezwa nsuku zonke.
Nikeza okwengeziwe Amahora angu-500,000 amamuvi ane-copyright ukuze ujabulele ngokukhululekile, okuhlanganisa ama-blockbuster aseHollywood, amamuvi e-Hong Kong TVB, isiThai, isiKorea, amamuvi aseShayina, ama-Vietnamese,… asakazwa ngokuhambisana.
Than Iziteshi ze-TV eziyi-140 zasekhaya nezamazwe ngamazwe njenge: VTV, HTV, VTC, K+, HBO, CNN,…
Okuningi okuqukethwe kuyalandiswa futhi kunemibhalo engezansi.
I-HD Egcwele nekhwalithi yesithombe engu-4K evamile (Kuye ngokuqukethwe).
Isici sokubhukha i-aphoyintimenti.
Jabulela imidlalo evuthayo bukhoma Isiteshi se-K+.
Ungasetha okuncamelayo komuntu siqu njengokwengeza noma ukususa izintandokazi zakho ozokubuka kamuva, ubuyekeze umlando, noma ususe umlando.
Izinqubo zokubhalisa nezokukhokha ziyinkimbinkimbi.
Okuqukethwe kwamahhala kulinganiselwe futhi kungase kungathandeki. Udinga ukubhalisela i-akhawunti ye-VIP, i-VIP HBO, i-VIP K+ ukuze ujabulele zonke izici zokuzijabulisa zohlelo lokusebenza.
Okuqukethwe okuningi okukhethekile mayelana namafilimu afakiwe, uchungechunge lwe-TV, amamuvi kanye nezinhlelo zezemidlalo,…
Nikeza okwengeziwe Amahora angu-200,000 amamuvi okokuzijabulisa okuhlanganisa amafilimu anamalungelo obunikazi nakhethekile (ama-blockbusters ase-Hollywood, uchungechunge lwe-TVB yase-Hong Kong, amafilimu ase-Korea, amafilimu e-Thai, amafilimu omlando wase-China, amafilimu ase-China, amafilimu ase-Vietnamese).
Iziteshi ze-HOT TV ezikhanga kakhulu ezingaphezu kwe-100 zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezifana ne-HBO, i-Cinemax, ama-Box Movies, i-Cartoon, i-Fashion TV, i-CNN,…
Iziteshi ze-TV zamahhala ezingaphezu kwe-100: i-VTV, i-HTV, i-HTVC, i-VTC, i-THVL, i-SCTV kanye nenqwaba yamashaneli e-TV asendaweni.
Amamuvi awavuselelwa njalo.
Iziteshi eziningi azikusekeli ukudlalwa.
Cishe iziteshi ze-TV ezingama-200 ezifana ne-VTV, i-HTV, i-VTVcab, i-VTC, iziteshi zakwamanye amazwe njengeFox Movies, Box Movies, … neziteshi zasendaweni.
Ibhola lezinyawo elibukhoma i-Europa League, Imidlalo ye-SEA, i-AFF Suzuki Cup, i-V – League, iLa Liga, iBundesliga neminye imiqhudelwano eminingi.
Ihlinzeka ngezinkulungwane zeziteshi ze-TV zamahhala, amamuvi, namavidiyo wokuzijabulisa.
Kuningi okuqukethwe okutholakalayo ukuze kubukwe mahhala ngaphandle kokungena ngemvume.
Yenza okuqukethwe kube ngokwakho kuze kufike kumaphrofayili angu-5.
Izinhlelo zokusebenza ezisebenza ku-TV azisheleli, zivame ukunensa futhi zifiphele.
Amaphutha okuphuma kuhlelo lokusebenza angenzeka.
Ingase ingahambisani kwamanye ama-TV Boxes.
Isithombe sizinzile futhi sicacile.
Iziteshi ze-TV ezine-copyright ezingaphezu kwe-100 ezahlukahlukene zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezinekhwalithi ye-HD.
Yakha iziqeshana zamagoli, amaphuzu avelele ebhola neminye imiqhudelwano.
Kuningi okuqukethwe okwakhelwe izingane ngokukhethekile.
Iziteshi ze-TV namamuvi akhanga kulabo abangabalandeli bamafilimu e-Hong Kong TVB noma abathanda iziteshi ze-SCTV.
Isivinini sokubuka esisheshayo, ukushintsha okulula kwesiteshi.
Okuqukethwe akucebile futhi akuhlukile njengezinye izinhlelo zokusebenza zokubuka amafilimu aku-inthanethi.
Umabonakude okhiqizwe yi-SCTV uqobo ku-SCTV VOD/SCTV Online.
Indawo enkulu yokugcina impahla yamamuvi e-Vietnamese ne-Asian, ama-blockbusters amakhulu avela e-Hollywood, anemibhalo engezansi yesi-Vietnamese, ebhalwe phansi.
Imiqhudelwano yezemidlalo edumile emhlabeni efana neSerie A, English Premier League, …
Uhlelo lokufunda lwesiNgisi lwezingane, umbukiso we-TV okhangayo.
I-interface inzima kakhulu ukuyisebenzisa, isebenza kancane, noma i-lags.
Iziteshi ze-Warner TV, i-Animax, i-HBO ne-4 K+ azikasekelwa.
Ayinazo isivinini nokulungiswa kokulungiswa.
Isicelo konke mahhala.
Buyekeza izinhlelo ezisakazwa phakathi nenyanga engu-1.
Izindaba zevidiyo ngesigaba: Okwakamuva, Izindaba, Ezemidlalo, Ezokuzijabulisa, Ezamazwe Ngamazwe, Amafilimu Esici,…
Okuwukuphela kohlelo lokusebenza olusemthethweni nolune-copyright ye-TV.
Ikuvumela ukuthi ukhethe ukubuka ngeqoqo.
Izinga lamashaneli lincike kwikhwalithi yokudlulisela.
Okuqukethwe izikhangiso eziningi.
Sekela kuphela amamodeli e-Android Box ne-Android TV asebenzisa i-Android 4.2 noma isistimu yokusebenza ephezulu.
kweshumi nambiliI-VTV Entertainment
Okuqukethwe esiteshini se-VTV kubuyekezwa njalo kuhlelo lokusebenza futhi kubukwe bukhoma.
Amamuvi agcwele, izinhlelo zamahlaya, uMbukiso we-TV esiteshini se-VTV.
Izinhlelo eziningi zezingane ezikhangayo zezingane.
Buka uhlelo lwezinhlelo eziteshini ze-TV.
Isixhumi esibonakalayo esilula, amavidiyo abukwa kalula, afanele wonke umuntu.
Uhlelo lokusebenza luvamise ukuphahlazeka ku-TV.
Kukhona isimo sokunethezeka, izikhangiso eziningi.
Ikhwalithi yamavidiyo amaningi inomkhawulo (imvamisa ingu-360p kuphela).
Isixhumi esibonakalayo esilula, esihle, esisebenziseka kalula.
Sekela izici ezilula njengezikhumbuzi, bonisa umbukiso wezinsuku ezi-5, dala induduzo kubasebenzisi.
Ikhwalithi yesithombe ephezulu, umsindo omuhle, isivinini esizinzile, i-jerky encane noma iqhwa uma ubuka.
Iziteshi eziningi ezithandwayo zakwamanye amazwe, i-VTC, i-VTV, iziteshi zasendaweni, njll.
Iqoqo lochungechunge olukhangayo, amamuvi, nemibukiso yegeyimu kuboniswa ngokuya ngokuthandwa yikhasimende ngalinye.
Inani leziteshi nesitolo sokuqukethwe lincane uma liqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza ezikhokhelwayo.
Ngenhla kunezinhlelo zokusebenza eziyi-13 ezidumile zokubuka i-TV ne-TV ku-Android TV i-Dien May XANH engathanda ukukwazisa yona. Ngethemba ukuthi uzoba nolwazi oluwusizo kakhulu mayelana nezinhlelo zokusebenza ezifanele i-TV oyisebenzisayo!